Marley Dias, musikana akatanga chirongwa chekutsvaga mabhuku chiuru aine vasikana vatema | Zvazvino Zvinyorwa
Mwedzi mishoma yapfuura, humwe husiku, pavakanga vachidya, musikana ane makore gumi nerimwe chete anonzi Marley Dias akaudza amai vake kuti aive "Vanorwara nekuverenga nezve vakomana vachena nembwa dzavo" nekuda kwekuverenga kunomanikidzwa kwavakatumira kuchikoro kwavo chiri munharaunda yePhiladelphia.
Vachipiwa izvi, amai vake vakamubvunza kuti akaronga kuitei nezvazvo, iye ndokupindura
"Tangisa mushandirapamwe wekutora mabhuku mune vasikana vatema ndivo vanopikisa kwete vanhu vechipiri"
Nechisarudzo chakajeka, mazwi aya haana kukanganikwa uye Marley Dias pachake akatanga iyo # 1000BlackGirlBooks mushandirapamwe nedonzvo rekutsvaga chiuru chemabhuku mune vasikana vatema vari protagonists yenyaya uye ndokuzopa mabhuku kuraibhurari ine mari shoma iri muJamaica, uko kwakakurira amai vaMarley, Janice. Kuna amai vake, danho iri raanoita nemwanasikana wavo rakakosha kwazvo nekuti zvarinoreva kuvasikana vatema vanogara munharaunda yakakomberedzwa nevarungu.
“Handina kuda kutaurwa nekuti ndakakurira munyika ine vanhu vazhinji vaive vatema asi iye achigara munharaunda yevarungu uye kugona kuziva zvine chirevo kwakakosha kwaari nekuvasikana vechidiki vatema kuUS. Mamiriro acho ezvinhu akakosha kwazvo kwavari: kugona kuverenga nyaya dzinoratidza zviitiko padhuze nevavanogara ”.
Mushandirapamwe wakatanga munaNovember 2015 uye zuva rekuvhara kwaive Kukadzi 1, saka Marley aive nemwedzi mina yekuwana mabhuku chiuru aine vasikana vatema. Mumwedzi wekutanga akakwanisa kutora mabhuku zana, achisvika kutanga kwaNdira aine ingori inopfuura hafu. Nekudaro, nekuda kwekukosha kwemushandirapamwe uyu, Marley akakwanisa kusvika mabhuku chiuru pakupera kwenguva yemushandirapamwe..
Mushandirapamwe uyu wakatangwa uye ukaitwa nemusikana ane makore gumi nerimwe anokosha zvakanyanya nekuda kwezvose zvazvinoreva nekuti zvikoro zvakawanda zvinowira mukati meimwe nzira uye kuverenga kwavo kwekumanikidza kwakafanana chaizvo kune mumwe nemumwe, kusingapi mukana wekuva nepfungwa dzakasiyana tarisa kune izvo vechidiki vese vanogona kuzviisa ivo pachinzvimbo chevanhu vakasiyana variko munyika. Pamusoro pekukosha kwakaratidzwa nediki uye kuratidzwa kuti, kana iwe uchida chimwe chinhu, nesimba unogona kuchiwana.
Pamusoro pazvose, ndinofunga kuti mhando yemushandirapamwe iyi inogona kuve yakakosha nekuti idanho rakanangana nekuenzana. Dai kuverenga kwakamanikidzwa muzvikoro kwaive kwemarudzi ese ehunhu: vachena, vatema, vanoita zvepabonde uye ngochani, vanhu vadiki vaizodzidza kuti nzanga yei chaizvo, nekuti kubva pazera diki vaizove vachiona sechinhu chakajairika, chimwe chinhu chinotoonekwa mumabhuku avakaverenga, uko zvinomirirwa neruzhinji rwevanhu zvinowanzooneswa Kana iwo mabhuku avanoverenga achigara ari eee, vakomana vachena, shanduko ichareva chimwe chinhu chinoshamisa uye chisingawanzoitika munharaunda. Ichi chikonzero nei kuverenga kuchikosha uye chenjera pakusarudza izvo vechidiki vanoverenga, sezvo vachifanira kukwanisa kukoshesa zvakasiyana iyo inovanza munyika ino yezvinyorwa.
Ini ndinokusiira vhidhiyo muChirungu uko musikana mudiki uyu anoonekwa naamai vake, avo vakaenda kuchirongwa chekutsanangura ichi chikuru chinyorwa chinyorwa chavakaita.
Iwe unofungei nezve iyi danho rakatorwa nekasikana aka? Ini ndinofunga zvinojekesa chaizvo kuti isu tinofanirwa kufunga zvakanyanya nezve izvo zvinodikanwa zvevadiki uye nekukoshesa zvavanofarira nemaonero avo kana tichivamanikidza kuti vaverenge mabhuku, nekuti kazhinji, nekusasarudzira bhuku rakakodzera kwavari, rinovagonesa kutiza munyika ino yemabhuku uye kuiona sechisungo kwete kunakidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Marley Dias, musikana akatanga chirongwa chekutsvaga mabhuku chiuru ane vasikana vatema